कोरिया पुगेकी नेपाली युवतीको वास्तविक कथा – List Khabar
Home / जीवनशैली / कोरिया पुगेकी नेपाली युवतीको वास्तविक कथा
कोरिया पुगेकी नेपाली युवतीको वास्तविक कथा
admin December 25, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 65 Views
यी दुई राशिका व्यक्तिको जोडीलाई मानिन्छ निकै खराब, विवाह भइहाले पनि टिक्दैन सम्बन्ध
जेठ १३ गते शुक्रबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
मोवाइलमा कुरा गर्दै उनले भनिन, म तपाईको सेल्टरमा बस्न आउन लागेकी दिदी, कसरी आउने ? मैले सोधें, कहाँबाट आउन लागेको ? ‘जल्ला भुक्तोबाट ।’
हाम्रो सेल्टर कोरियाको पूर्वोत्तरतर्फको एक शहर सुवनमा छ । तर, उनी दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रको जल्ला भुक्तो भन्ने ठाउँबाट आउन लागेको सुनेर मेरो मुखबाट अचा`नक निस्कियो, ओहो ! त्यति टाढाबाट ?
ट्रेनमा करिब चार घण्टाको यात्रा तय गर्नुपर्ने थियो उनले । सुवनयक (स्टेशन) सम्म ट्रेनमा आए|पछि हामी लिन आउँछौं, मैले भने ।सोही|बमोजिम उनी हाम्रो सेल्टरमा आइ`पुगिन् । मात्र ६ महिना भएको रहेछ, उनी इपीएस|मार्फत कृषि भिसामा को`रिया छिरेको ।
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जन्मेका उनी नेपाली भाषा बोल्दा पनि उनको मातृ`भाषाकै उच्चारण आउँथ्यो । बसमा यात्रा गर्दा बान्ता आउने भएकाले कालो प्लाष्टिक उनका साथमा थियो, जसले प्रष्टै पार्दथ्यो, उनको काठ|माडौं बसाइ लामो थिएन ।
माध्यामिक तहको मात्रै अध्ययन गरेकी उनी विवा|हिता हुन् । उनका बेरोजगार श्रीमान नेपालमै रहेछन् । सेल्टरमा आएको भोलिपल्टदेखि नै उनलाई पेट पोल्ने र टाउको दुख्ने रोगले सताएको उनले सुनाइन् । खाना पनि राम्रो खाइनन् । ६ महिना|भित्र नै उनले तीन ठाउँ काम परिवर्तन गरि`सकेकी रहिछन् । सागबारी गोड्ने|देखि भेडे खुसार्नी टिप्ने हुँदै रेष्टुरेन्टसम्म ।
कृषि भिसामा भए पनि कृषिकै साहुको रेष्टुरेन्ट भएकाले उनी रेष्टुरेन्टमा काम गर्न पुगिन् । त्यहीँ काम गर्दा बिरामी भएर काम गर्न नसकेपछि कामबाट निकालिइन् । त्यस`पछि उनी सेल्टरमा बस्न आइ`पुगेकी थिइन् ।
अर्कोर् काम खोज्नु`भन्दा पनि उनको उपचार प्राथमिकता थियो । त्यसैले नेपालीकै सहयोगमा अस्प`तालमा उनको सम्पूर्ण परीक्षण गरियो । तर, रिपोर्टमा कुनै रोग नदेखिए`पछि डिप्रे`शनले पनि यस्तो भएको हुन सक्ने चिकित्सकको सुझाव आयो ।
सामान्य केही औष|धि र सेल्टरमा सँगै बस्ने अन्य दिदी-बहिनीसँगको सामीप्यताले उनमा परिवर्तन आयो । उनी खाना राम्रै`सँग खान थालिन् । घुम्ने, डुल्ने र हाँस`खेल गर्न थालिन्, जसले उनको अनुहार हँसिलो हुँदै आयो ।एक दिन सेल्टरमा एक्लै भएका बेला उनले मसँग कोरियामा बस्दाको आफ्नो विगत खोलिन् । सुनेर मेरो मनै कुँडियो । उनले कोरिया आउँदाको पीडा ओकलिन् ।
कोरियाको इन्छन् एयरपोर्टमा ओर्लेर एकदिने तालिम सकिएपछि आ-आफ्नो साहु आएर लगे । हामी चार जना केटीहरु लाई एउटै साहुले लिएर खाङवन्दो लगेकोमा हामी खुशी भयौं । एक्लै-एक्लै कहाँ पुगिने हो भन्ने डर लागि`रहेको थियो, तर चारै जना सँगै बस्न पाउने भएर दंग परेका थियौं ।
काम पनि सजिलो थियो मुला र साग गोड्ने, काँक्रा टिप्ने । चार जना एउटै मोवाइल बाट पालै`पालो नेपालमा परिवार`सँग कुरा गर्थ्यौं ।तर, १५ दिन हुनासाथ साँझमा आएर साहुले तिमी`हरु भोलि नै यो ठाउँ छाड्नु भने । साहुको कुरा सुनेर हामी सबै|जना अक्क न बक्क पर्यौं । अर्को ठाउँमा काम खोज्न जानु, तिमी|हरुको पत्र मैले नोदुङबो (जब सेन्टर)मा पठाइ`सकेको छु । त्यहीँ गएर बुझ्नु, साहुले भन्यो ।
त्यो ‘जब सेन्टर’ कहाँ हो, कसरी जाने, सम्झेर चिन्तित बन्यौं सबै`जना । धन्न जब सेन्टरको ठेगाना कागजमा लेखेर साहुले दिए । भोलिपल्ट बिहान चारै`जना आ-आफनो सामान लिएर हिड्यौं ।
कहाँ जाने र कसरी जाने यो बिरानो ठाउँमा ? कोरियन भाषा पनि राम्रो बोल्न सकिँदैन । सबैको अनुहार मलीन थियो । त्यहाँ`बाट बस चढ्ने ठाउँसम्म एक|जनाले पुर्‍याइदियो । त्यहाँ पनि एक|जना कोरियनकै सह|योगमा ‘जब सेन्टर’को ठेगाना हेरेर बस स्टेशनसम्म जाने बस चढाइदियो ।
स्टेशनमा पुगेर उत्रियौं । त्यहाँ सहयोग गर्ने एक नेपाली युवा आउनमा ढीला भयो । सिमसिम पानी परेको थियो ।चिसोचिसो मौसममा झोला डोर्याउँदै खाना न पिना सडकमा चारैजना रुँदै हिँड्यौं । धन्न ती नेपाली युवाको सहयोगमा उनीहरुलाई बेलुकी चर्चको सेल्टरमा पुर्‍याइदिएपछि राहतको श्वास फेर्‍यौं ।’
रेष्टुरेन्टमा काम नगरेको दिनभर साहुले खाना पनि नदिएको र आफै किनेर खानलाई पनि ठाउँ नदेखेकाले भोकै बस्न परेको स्मरण पनि उनले गरिन् ।उनले रेष्टुरेन्टमा काम गर्दा लामो समय`सम्म एकजना पनि नेपालीको अनुहार`सम्म देख्न पाइनन् । उनले नेपाली कुरा सुन्न र बोल्न पाइनन् । एकजना नेपाली देख्नमात्रै पाए पनि हुन्थ्यो नि जस्तो एक्लो`पनले धेरै सताएको पी`डा पोखिन् ।
न त कोही नेपाली भेट्न पाइने, न त कुरा नै गर्न पाइने । किन कोरिया आएँछु, कहिले नेपाल फर्कौंजस्तै भएर निस्सासिएको अनुभूति उनले सुनाइन् ।उनको यो पीडा सुनेपछि नेपालमा इपीएसको र्फम भर्न मात्र भोक प्यास बिर्सेर प्रह`रीको लाठी खाँदै लाइनमा बसेका हजारौं युवा`युवतीलाई सम्झिएँ मैले । – केही वर्ष अघि अनलाइन खबर मञ्जु श्रेष्ठले लेख्नु भएको यो पीडा`दायी घटना`लाई पुन शेयर गरेका हौं ।
Previous चीसोमा बाथरुममा नुहाउदा यी कुरा ख्याल नगरे जान्छ ज्यान, लगातार ३ जनाको मृत्यु
Next पठाओले ल्यायो नयाँ सुविधा, के छ प्रावधान ?
कस्तो हो टन्सिल रोग ? यस्ता छन् लक्षण र बच्ने उपाय
काठमाडौं । मौसम परिवर्तनसँगै हिजोआज धेरैमा, घाँटी दुख्ने, घाँटी खस्खसाउने, खानेकुरा निल्न अप्ठ्यारो हुने, घाँटीभित्र …
डेटिङ जान पूरै गाउँभरी लोडसेडिङ
कति बढ्ने भयो त सरकारी कर्मचारीको तलब ?